Xaflad lagu soo dhaweynayay Xayiraadii laga qaaday Shirkadii Barakaat oo lagu qabtay Muqdisho + (SAWIRRO) – HalQaran.com
Xaflad lagu soo dhaweynayay Xayiraadii laga qaaday Shirkadii Barakaat oo lagu qabtay Muqdisho + (SAWIRRO)
February 23, 2020 February 23, 2020 Halqaran	0 Comments Guddoomiyaha Shirkadda Barakaat Sheekh Axmed Cali Jimcaale, Shirkada Al Barakaat oo xayiraadii laga qaaday, Xaflad lagu soo dhaweynayay Xayiraad ka qaadista
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay, taas oo loogu dabbaal-degeyay xayiraaddii waaxda maaliyadda dalka Mareykanka ay ka qaadday shirkadda Al-Barakaat.
Munaasabaddan oo ay ka qeybgaleen masuuliyiin dowladeed, ganacsato, ururrada haweenka iyo dhallinyarada iyo guud ahaan qeybaha bulshada ayay ku soo dhaweeyeen in markale shirkaddii Barakaat ay dib uga shaqeyso dalka.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo munaasabadda hadal ka jeediyey ayaa sheegay in uu goobjoog u ahaa dhammaan dhacdooyinkii dhacay xiligii shirkadda xayiraad la saaray, islamarkaan uu xiligaan aad ugu faraxsanyahay in ay dib u helaan xoriyadoodii ganacsi.
Sidoo kale, Sheekh Cali Wajiis, oo Ka mid ah culumada Soomaaliyeed ayaa maamulka shirkadda ugu hambalyeeyay in dib ay u helaan xoriyaddii ay ku shaqeyn jireen, sidoo kalena waxa uu ugu baaqay in ay kaalin ka qaataan koboca dhaqaalaha iyo shaqo abuurka dalka.
Guddoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Batuulo sheekh Axmed Gaballe iyo Guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab oo matalayay ururrada haweenka ayaa iyaguna si wadajir ah u bogaadiyay in shirkaddu mar kale ay dalka ka howlgasho una adeegto shacabka Soomaaliyeed.
Ugu dambayn, Guddoomiyaha Shirkadda Barakaat Sheekh Axmed Cali Jimcaale ayaa Ka sheekeeyay garab istaagii ay u sameeyeen dadka Soomaaliyeed kadib go’aankii ay dowladda maraykanku xayiraada uga qaadday shirkaddaha Barkaat iyo wixii ka dhashay.
Barakaat oo ahayd shirkad ganacsi oo si gaar ah loo leeyahay soona shaqa bilowday sideetamaadkii qarnigii tagay ayaa ka mid ahayd ilihii dhaqaale iyo shaqa abuur ee uu dalku lahaa oo ay saameeyeen weerarradii lagu qaaday dalka Mareykanka 11/9.
Barakaat ayaa ahayd xawaaladda ugu weyn ee ay lacagaha dadka Soomaaliyeed isugu diraan iyada oo maamulka shirkaddu sheegeen in xilligii ay shaqeynaysay sanad walba la marsiin jiray shirkadda lacag dhan 140 milyan oo dollar.
← Somalis celebrate lifting of sanction on Barakaat
Wararkii ugu dambeeyay iyo Suuqii gacansiga ee Gaalkacyo oo weli xiran maalintii Afaraad! →
December 26, 2019 December 26, 2019 Weriye Ahmed Abdi 0
May 17, 2020 May 17, 2020 HalQaran Staff 0
Maxaa ka jira in Dhoobo-Daareed uu kulamo ka dhan Puntland kawado Addis Ababa?
December 6, 2019 December 5, 2019 Weriye Ahmed Abdi 0